Qofkii ugu horeeyay ee looga shakiyay Coronavirus oo lagu karantiilay magaalada Jigjiga. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSomali NewsQofkii ugu horeeyay ee looga shakiyay Coronavirus oo lagu karantiilay magaalada Jigjiga.
Qofkii ugu horeeyay ee looga shakiyay Coronavirus oo lagu karantiilay magaalada Jigjiga.
March 25, 2020 marqaan Somali News 0
Maamulka dowlad deeganka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ay karantiileen qof looga shakiyay in uu qaba caabuqa caroona Virus.
Wasiirka wasaraada caafimaadka Gobolka Soomaalida Itoobiya Dr yuuusf Maxamed Cali ayaa sheegay in gabar ka timid magaalada addisababa ee casimada itoobiya dhigatana jamacada jigjiga looga shakiyay in ay qabto cudurka dilaaga ah ee caroona viris ama covid 19 maamulkana uu karaantiile.
maalmihii u danbeeyay cudurkan ayaa waxa uu fara ba,an ku hayay caalamka waxana meelaha dhawaanahana laga helay ka mid ah kisaskiisa Itoobiya Kenya Jabuuti iyo Sooomaaliya
Jubbaland oo ku dhawaaqday ciqaabta ka dhalan karta hadii qaali laga dhigo badeecadaha iyadoo laga faaiideysanayo Coronavirus.